Accueil > Gazetin'ny nosy > Politika : « Faible-be » ny mpanohitra
Sady tsy mahay no dondrona no manaonao foana. Izany no azo lazaina ny mpanohitra eto Madagasikara amin’izao fotoana izao.
Raha mba miheno ny ady hevitra ataon’izy ireo isika dia tena mivaralila tanteraka amin’izany atao hoe fanoherana izany ny raharaha. Tsy misy resaka raha tsy ny hoe ataovy mangaraharaha ny fitantanana ny vola momba ny “coronavirus” ity izay azo avy any amin’ny mpamatsy vola. Dia izany ka tena “failbe-be” hoy ny fitenin’ny tanora ankehitriny. Fa inona moa no mahasakana ny mpanohitra tsy hikaroka ny vaovao amin’izany ka hilaza izany amin’ny fomba tiany hilazana azy? Mifandray tanteraka amin’ny mpamatsy vola ry zareo ireo koa maninona raha maka ny “dossiers” momba izany amin’izy ireo? Arakaraka ny ilazan’ny mpanohitra fa tsy misy mangarahara ny fitantanana ny vola eto Madagasikara no toa voa maika mahazo vola avy amin’ny mpamatsy vola ny fanjakana ankehitriny.
Raha toa tsy mahazo izany loharanom-baovao izany dia maninona raha mitady izany amin’ny sampandraharaham-panjakana izay miandraikitra ny fisafoana ny fampiasana ny volam-panjakana. Manana ny antsoina hoe IGE na ny “inspecteur génèral de l’Etat” isika ary manana ny foibeny eo Antaninarenina izy io. Mbola misy koa ireo antsoina hoe “contrôl financier” sy ireo “contrôleur de dépenses engagées », ary hatramin’ireo antsoina hoe « cour des comptes » izay fitsarana manokana momba ny fitsarana ny vola lanin’ny fanjakana.
Marina fa misy ny antsoina hoe tsiambaratelo amin’ny asan’izy ireo nefa misy koa ny tsy azo anaovana. Raha tena hitady izy ireo dia inoana fa tena hita izany saingy dondrona sy tsy mahay ka izao manaonao foana izao.
Raha tena mpanohitra marina izy ireo dia tokona hahazo ireny zavatra takiany ireny satria zon’izy ireo no maka izany sy manao fanadihadiana ary manao fikarohana momba izany. Izany no ilazanay fa mpanohitra dondrona, sady tsy mahay no manaonao foana no misy amin’izao fotoana izao.
Iarahana mahalala koa ange fa manana orinasa misehatra amin’ny asa fanaovan-gazety sy ny serasera ireo mpanohitra ireo. Koa maninona no tsy hainy ny mampiasa izany? Ny mpanao gazety izay manana fahazoan-dàlana manokana amin’ny fomba fitadiavana loharanom-baovao.
Ankoatran’ireo dia tena vendram-belona tanteraka ny mpanohitra amin’izao fotoana izao ary tena “faible-be” mihitsy raha ny fahitana azy amin’ny fomba fijeriny sy fiadiany hevitra sy ny fanehoan-kevitra. Litania tsy afaka ao ambavan’izy ireo ny hoe: “tokony hisokatra amin’ny mpanohitra ny fanjakana ankehitriny”. Midika izany fa omeo toerana izahay dia hangina sy tsy hitabataba intsony. Mahagaga fa fitondrana lazainy fa tsy mahomby ka maninona no miadivarotra ny hitantana miaraka aminy indray? Ny eto Madagasikara tokoa dia efa toa kolon-tsaina politika ny fitabatabana mba hahazoana toerana.
Raha tena mpanohitra marina izy ireo dia tsy tokony hiady izany fiarahana mitantana amin’ny fanjakana izay toheriny izany fa tokony miomana dieny izao amin’ny fifidianana amin’ny taona 2023. Ireo mpanohitra ireo izay tsy misy zavatra ataony fa manakiana fotsiny ihany. Tsara ny manakiana fa mbola tsara lavitra noho izany ny mampiseho fa mahavita tsara lavitra noho ny mpitondra ankehitriny.
Ingahy Ravalomanana Marc sy ingahy Hery Rajoanarimampianina ve no milaza azy fa mpanohitra eto amin’ity firenena ity? Tena “faible-be” raha ireo no asian-teny. Mpitondra fanjakana nangalatra sy be kolikoly ireo ary nanimba ny firenena Malagasy. Tsy ho tenenina ireo mpomba azy fa tena tsy misy halahatra mihitsy hatramin’izao. Mpiteniteny foana no betsaka ary olona miandry ny hatsoina fotsiny dia mangina satria mba te hahazo toerana. Minisitra nanodikodina volam-panjakana, depiote be kolikoly, mpikambana tao amin’ny kabinetra sy “Staff teknika” nanodikodina volam-panjakana sy olona very toerna avokoa ny ankamaroan’izy ireo. Tsy tenenina intsony ireo parlemantera tsy lanimù-bahoaka intsony noho ny toetra ratsy nataon’izy ireo.Tena efa tsy manana holazaina intsony fa miandry tataka fotsiny sisa, dia milaza fa tia tanindrazana sy mpanao politika hono amin’izao fotoana izao.
Fantatry ny Malagasy maro daholo izy rehetra ireo, ary efa nametraka tantara ratsy teto amin’ity firenena ity. Milaza miara-mahita isika fa zava-doza no nataon’ingahy Ravalomanana Marc sy ingahy Hery Rajaoanarimampianina tamin’izy roalahy nitantana ity firenena ity. Izy roalahy ireo no milaza fa lehiben’ny mpanohitra hono. Tena zava-doza!
“Faible-be” ny mpanohitra amin’izao fotoana izao fa sady tsy manana fotokevitra hijoroana afatsy ny hoe: “andao hiara mitantana”. Olona tsy maharesilahatra intsony satria nangalatra sy be kolikoly tamin’izy ireo nitantana ny firenena.
Lany olona i Madagasikara ankehitriny fa sady miteniteny foana ny mpanohitra no tsy mieritreritra raha tsy ny vola ihany sy ny seza. Izany no tao hoe “faible” io.